Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ: CCW 2015 Show ကိုကို Preview - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 CCW SATCON » Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ: CCW 2015 Show ကိုကို Preview
WESTFORD, Mass - ။ အောက်တိုဘာ 21, 2015 - Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ, ဆန်းသစ်အိုင်ပီနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး, ထုတ်လွှင့်နှင့်ဆက်စပ်စျေးကွက်ထောက်ပံ့ဖိုင်ဘာ-based မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်၏လောကဓာတ်-class ကိုပံ့ပိုးပေးသူ, အကြောင်းအရာ & ဆက်သွယ်ရေးကမ္ဘာ့ဖလား (CCW) 2015 မှာအောက်ပါဖြေရှင်းချက်တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
4K, အိုင်ပီ, Ethernet နဲ့ JPEG, 2000 များအတွက် integrated ကုန်ပစ္စည်း Portfolio နှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ
CCW 2015 မှာ Artel ယင်း၏ DigiLink, Fiberlink (R) နှင့် Scan ကို Do (R) ထုတ်ကုန်လိုင်းများ၏ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီ 4K, အိုင်ပီ, Ethernet နဲ့ JPEG, 2000 ၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုရွေးချယ်ရေး feature ပါလိမ့်မယ်။
နယူးနှင့် Enhanced DigiLink နှင့် Fiberlink ထုတ်ကုန်:
DigiLink ရဲ့ 9-ဆိပ်ကမ်း Ethernet Aggregators နှင့် Optical transceiver အတွက် Enhanced စှမျး
CCW 2015 မှာ Artel ဗီဒီယိုကိုစီမံခန့်ခွဲရန် VLAN စည် and Tagging စွမ်းရည်နှင့်အတူ DigiLink ရဲ့ 9-ဆိပ်ကမ်း Ethernet Aggregators နှင့် Optical transceiver တခုအဖြစ်မည် Ethernet ဟာဒေတာကွန်ရက်များအနှံ့နောက်ဆက်တွဲလမ်းကြောင်းများအတွက်စီး။
နယူး dual-ဆိပ်ကမ်း L-Band Demodulator
Artel DigiLink ရဲ့အသစ် Dual-port သည် L-တီးဝိုင်း demodulator feature ပါလိမ့်မယ်။ နှစ်ခုက L-band အချက်ပြမှုများအထိလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်ဒီဗွီဘီ-asi သူတို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်း, ဒီ module တစ်ခုကိုလည်း ETSI TS 103 129 လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ID ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုထောက်ခံပါတယ်။
နယူး DL4120 ကိုယ်ထည်
CCW 2015 မှာ Artel ဘက်ပေါင်းစုံ 4120 အတူ DL20 Chassis ကိုမည်ဖြစ်သည် 20 3G လမ်းကြောင်း, Ethernet switching နှင့်ကိုယ်ထည်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည် x ။
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Artel ရဲ့ DigiLink မီဒီယာပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်း
နယူး Fiberlink ခြောက် Channel ကို HD/ SD က / asi multiplexing
CCW 2015 မှာ Artel အဆိုပါ Fiberlink ခြောက်ရုပ်သံလိုင်းတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် HD/ SD က / asi multiplexing ။ 1RU ကိုယ်ထည်၏ဤ TX / RX pair တစုံကိုခြောက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမှတက် aggregates HD-SDI, SD က-SDI နှင့်ဒီဗွီဘီ-asi ဗီဒီယိုဖိုင်ဘာကိုဖြတ်ပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်တစ်ခုတည်းသောလှိုင်းအလျားသို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲ optical ကွန်ရက်များသို့ feeds နှင့်မျှ configuration များလိုအပ်သည်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Artel/Artel_3560-Series.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Artel ရဲ့ Fiberlink ခြောက် Channel ကို HD/ SD က / asi multiplexing
"Artel ဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့်ဒေတာများဖြေရှင်းချက်၏အကြီးဆုံးတွင်လည်းတဦးကိုထောက်ပံ့ပေး - တန်ဖိုးနည်း မှစ. , လွယ်ကူသော-to-အသုံးချဘက်စုံသုံးပလက်ဖောင်းမှဝေးလံခေါင်သီများထားရှိဘို့အ-down ပစ် - ၏တဦးတည်းကိုအသုံးပြုပြီးအလှူငွေမီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်ဒီဇိုင်းထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ရန်ဖောက်သည်ဖွင့် ဈေးကွက်ထဲမှာအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောစျေးသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်လိုင်းများဖြတ်ပြီးပေါင်းစည်းမှုနှင့်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါသရုပ်ပြနေစဉ်ကျနော်တို့ IP- နှင့်ဖိုင်ဘာ-based ဖြေရှင်းချက်ပြခံရဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်။ "
- တွမ် Beardsley, ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဒါရိုက်တာ Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ
အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင် www.artel.com.
အေျကာင္းအရာ Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ (www.artel.com)
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး, ထုတ်လွှင့်နှင့်ဆက်စပ်စျေးကွက်ထောက်ပံ့ဆန်းသစ် IP- နှင့်ဖိုင်ဘာ-based မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်၏လောကဓာတ်အတန်းအစားပံ့ပိုးပေးသည်။ Artel ရဲ့ဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းချက်ဆုရ DigiLink မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းများပါဝင်သည်; Fiberlink (R), fiber-optic ဂီယာထုတ်ကုန်များစက်မှုလုပ်ငန်းအကြီးမားဆုံးရွေးချယ်ရေး; နှင့် Scan ကို Do (R) ကွန်ပျူတာကိုဗီဒီယိုစကင် converters ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.artel.com.
ဤနေရာတွင်ပေါ်ထွန်းအားလုံးအမှတ်တံဆိပ်များ၏ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ.
CCW 2015, Booth 948 မှာ Artel သွားရောက်ကြည့်ရှု
2015 4K Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ CCW 2015 Show ကိုကို Preview H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို ဆူညံသံလျော့ချခြင်း UHD / 4K / HD ကို viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Warsaw ကို	2015-10-21
ယခင်: ကုန်ကျစရိတ်, စကေးနှင့်အိတ်ဆောင်အကျိုးကျေးဇူးများများအတွက် post-ထုတ်လုပ်မှု Facility Run ကို VT ရွေးချယ် Forscene
နောက်တစ်ခု: pixel ပါဝါ Satis မှာဘက်ပေါင်းစုံပေးပို့ဖြေရှင်းနည်းများကိုပြသ